Google inowedzera kugadzirisa kwemamepu ePasi neMepu kunyorera | IPhone nhau
Google inowedzera kugadzirisa kwemamepu ePasi neMamepu ekushandisa
Iyo Google mepu sevhisi ndiyo yakanyanya kushandiswa pasirese, nekuda kwehuwandu hweruzivo iyo iyo iyo iyo iyo iyo yatinotipa isu isu vaviri kuburikidza ne akasiyana mafoni ekushandisa senge kuburikidza newebhu sevhisi. NeGoogle Mepu tinogona kumbotarisa nyika yatinoda kushanyira uye kuiona kubva kune vanofamba netsoka kana tinogona kuona kero yemugwagwa watiri kuzotsvaga bhuku rinotibvumidza kusvika nekukurumidza uye nyore. magumo edu. Asi zvinotibvumidzawo kuti titarise kumatunhu enzvimbo atinoda kushanyira kana kungoongorora zvedu kana zvehunyanzvi zvinangwa kuburikidza neGoogle Earth application.
Mwedzi wega wega iyo Mountain View-yakavakirwa kambani inovandudza satellite mifananidzo yekuvandudza Mepu nePasi masevhisi. Kuenderera mberi nesimba rayo rekuvandudza ese mapuratifomu uye ruzivo rwevashandisi, iyo hofori yeinternet yakagadzirisa zvakawanda zvemukati izvo zvatinogona kuona kuburikidza nekushandisa, ine yakakwira resolution mifananidzo iyo inotibvumidza isu kuti tione mune zvakadzama mifananidzo yavanotiratidza.
Kutenda kune iyo Landsat 8 satellite uye matekinoroji ekugadzirisa mifananidzo, nzvimbo zhinji dzepasi inogona ikozvino kutariswa pakakwirira resolution Kuenzaniswa neshumiro yakapihwa kwatiri kusvika zvino, iyo kunyangwe yanga isina kushata, inogona kusimudzira zvishoma. Sezvatinogona kuona mumufananidzo uri pamusoro, mufananidzo uri pamusoro unotiratidza chisarudzo chisina kujeka apo iyo iripazasi ichitipa zvimwe zvakawanda munzvimbo imwechete.
Kana iwe uchida kutarisa zvakanyatsoita shanduko mukugadziriswa kwakaitwa neGoogle, unogona kuzviita kuburikidza neGoogle Mapplication application kana kuburikidza neGoogle Earth application, mune ayo akasiyana maBhaibheri, kungave desktop kana yakanakira nharembozha.
Google Mepu - nzira uye chikafuvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google inowedzera kugadzirisa kwemamepu ePasi neMamepu ekushandisa
iOS 10 inotibvumidza kukoshesa kurodha pasi kwekushandisa
Todoist inogamuchira chaiyo yakakura ficha yekuvandudza